#OccupyOyoun · Oyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
Ukufikelela kubugcisa nenkcubeko
Umnxeba ovulekileyo wezimvo zembono ngexesha lokutshixa okokuqala ukwenza kunye nokuphumeza iifomathi ezintsha ezenza ukuba kube nakho ukuxhasa amagcisa kunye nokwenza ubugcisa nenkcubeko (ngaphaya komjelo ophilayo) ifikeleleke- nakwindawo yokuzimela yeendawo ezibonakalayo.
NgoLwesihlanu, nge-13.03.2020 kaMatshi XNUMX, amaziko enkcubeko eBerlin aye avalwa ngenjongo yokunciphisa ukusasazeka kwe-coronavirus. Oku kuthetha ukuba imisitho iye yarhoxiswa, nto leyo ebeka ingeniso yamagcisa amaninzi kunye nabasebenzi bezenkcubeko emngciphekweni.
Sijongana njani nayo xa izixhobo ziphela ngesiquphe? Ngawaphi amathuba amatsha kwaye singazenza njani izinto eziqinileyo ngezithuba ezikhoyo? Yeyiphi imisebenzi eyenziwa ngamaziko enkcubeko, ezopolitiko kunye noluntu ngexesha lokungaqiniseki? Singabucinga njani ubugcisa nenkcubeko?
Njengeziko elingenzi nzuzo lenkcubeko, uOyoun uziva enoxanduva lokusebenza namagcisa achaphazelekayo ukufumana impendulo (engekho) kwimibuzo.
"Phakathi kweengxabano, kukho ithuba."
Indibano yocweyo yemidlalo yeqonga yabasetyhini ye-FLTI * enemvelaphi yokufuduka, ikhokelwa nguLorena. Abathathi-nxaxheba baqala uhambo oludibeneyo lokuphanda izihloko "zomzimba, ukufuduka kunye nenguquko".
Abucala: Iiseshoni zokuXhobisa
Iiseshoni zokuXhobisa luthotho lwentsebenzo yomculo omanyelwayo. Ubuninzi kunye nokudityaniswa kwendalo, kunye nokuxhonywa kunye nokukhanyisa ukudala ukungaqondi kwehologram ebonakala ngaphakathi kwityhubhu yoqikelelo.